Ma maleeysan ebid, sideey maanta tahay! (Qormo+Sawirro) | Qaranimo Online
Ma maleeysan ebid, sideey maanta tahay! (Qormo+Sawirro)
October 27, 2012 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: QOL Admin Isbedelka xaaladaha dunida waa wax uu Ilahay ugu tala galay inay dadku ku noolaadaan. Iyadoo dadkana uu Alle ka dhigay kuwo u samaysan la qabsiga wax kasta oo noloshooda kusoo kordha si kasta oo ay ugu adkaataba.
Amniga ayaa muhiim u ah nolosha qofka. Arrimaha isbedela ee saamaynta adag ku yeesha nafta aadamigana waa uu ugu horeeya amniga.
Si kasta oo goob uu amni xumo uga dhacana, intii uu ilahay nolol u qoray waa ay sii noolaanayaan. Maalinta uu alle ogolaado inay xaaladuhu hagaagtana kuma adkaanayso qof kasta inuu umuurihiisa hagaajisto lana tallaabsado nabadda iyo xasiloonida bedeleysa amni daradii uu horay u garanayay.
Tani waxan ku xaqiijiyay xaaladda dhabta ah ee waqtigan ka jirta Muqdisho.
Magaaladan oo Caasimad u ah dal uu Labaatan Sano ka jiray dagaal sokeeye ayaa waxay soo martay waqti aad u adag oo burbur iyo barakac huwanaa.
Muuqaalada maanta ee Muqdisho ka jira ayaa astaan ka bixinaya in dadkeedii soo bartay colaadaha ay waqti kooban gudaheed la jaan-qaadeen isbedelka xaaladda ku yimid.
Warbaahinta Caalamka iyo kuwa Soomaalida waxay hadal haayaan in amnigii Muqdisho iyo qaybo badan oo Somalia ka mid ah uu hagaagay. Iyagoo shaaciyay goor hore in noloshu ay soo hagaagayso dalkuna uu ku socdo horumar.
Hadaba aragtidaas ka hadlaysa in amnigii Muqdisho uu hagaagayo ayaa waxay igu dhalisay inaan isku eego dadka magaalada ee waqtigan iyo waqtiyadii colaadaha. Wax badan oo aan horay u aragna way iisoo bexeen!
Aniga Magaaladan ayaan ku dhashay horaantii dagaalada Sokeeye ee burburiyay dowladi dalkeena ka jirtay. Isla magaalada baana kusoo noolaa inta ugu badan waqtigeyga.
Waxaan hana-qaaday iyadoo ay colaadu dhinacyada magaalada ka ololeyso. Maliishiyaadka hubaysan iyo sharci la’aantuna ay is dhex-qaadayaan.
Ma garanayn Muqdisho oo aan ahayn meel dagaal uu ka socdo, dadkeeduna kala qoqobanyahay oo qabiil iyo neceyb ay duruufuhu dhex dhigeen ku kala xaniban.
Mudooyinkan dambe waan maqlayay in isbedel uu ku yimid dhamaanba waxyaabihii aan kusoo bartay magaalada. Gaar ahaanna nabadgeliyada ayaa soo hagaagaysay sida ay inta badan Soomaalidu arkayeen.
Tani waxay ka dambeysay markii dagaalo Saddex Sano u dhexeeyay dowladda Somalia iyo Xarakada Al-Shabab Al-mujaahidiin ay soo idlaadeen.
Wax yar un ka dib waqtigaasna waxaan baranay dhaq-dhaqaaqyo dhinacyo kala duwan taabanaya oo gudaha magaalada lagu arkay.
Dad badan oo qurbaha ku noolaa ayaa dib magaalada ugusoo laabtay. Dhismayaal waayo hore burburay ayaa dayactir lagu bilaabay. Guryo cusub baa la dhisay. Wadooyinkiina qaarkood Leyrar baa lagu xiray oo illaa Habeenkii u saamaxay Gaadiidku inay maraan.
Intaas ayaa kusoo korordhay magaaladii Labaatanka Sano taaheysay ee ay dagaaladu cagta mariyeen.
Waxaa sii dheer, dadkii magaalada ku noolaa iyo kuwa yimidba waxay bilaabeen inay baadi-goobaan meelo ku haboon inay ku muujiyaan dareenkooda farxadeed kuna daamaashadaan.
Xeebaha magaalada oo ay Liido ugu horeyso ayaa qaabilay dadkii xamaasadeysnaa. Halkaas ayeeyna dadku maalmihii u horeeyay ee ay dagaaladu joogsadeen isugu imaan jireen.
Dhowr jeer baan tagay Liido, Sawirro iyo muuqaalo ka turjumaya waxa halkaas ka socdana waan kasoo tabiyay anigoo soo marsiinaya Warbaahinta Soomaalida ee aan la shaqeeyo.
Hase yeeshee ma jirin waqti iiga yaab iyo indha-indheyn badnaa maanta oo ahayd Jimco (Maalinta Koobaad ee Ciidul Adxa).
Anigoo la socda tiro asxaabteyda ka mid ah, ayaan u dhaqaaqay Liido oo aan is lahaa kusoo qaado qayb waqtigaaga ka mid ah, maadaama ay Ciid ahayd dadkuna goobaha loo dalxiiska iyo nasashada tago u jiheysanayeen.
Waxay tagista Liido ee maanta ii noqotay farxad iyo reyn-reyn. Waxayna I tustay muuqaalo indhahayga ku cusbaa oo aan wax badan intii aan halkaas joogay is-waydiinayay.
Dad badan baa ku sugnaa Xeebta, Gaadiidka raaxada oo ay dadku wateenna si aan tiro-koob lagu gaarayn ayuu u yiilay goobta.
Mudo dhowr Bil ka badan ayaa iigu dambeysay Liido iyo tagitaankeeda. Illaa iyo goortaasna waxyaabo badan ayaa kusoo kordhay goobta.
Maqaaxi lagu magacaabo Liido Sea Food ayaa laga furay agagaarka Xeebta. Banaankeeda hore ee dhanka Wadada Laamiga ah xigana waxaa yaala Gaadiid aad u badan oo markaad kor ka aragto aad malaynayso inaad timid goob aanu ebid burbur iyo dagaal ka dhicin.
Marka aad soo daadagto oo aad dhanka Xeebta u kacdana, isla Maqaaxida ayaa dadka u sahashay inay helaan goob-fadhi kusii jeeda Xeebta oo Kuraas iyo Miisas ay Shaah iyo Cuntaba ku qaadanayaan la dhigay.
Waxaan u dhaqaaqay inaan gudaha u galo Maqaaxida, ka gadaal markii aan dhowr Daqiiqo banaankeeda hore taagnaa oo aan aniga iyo Asxaabtii ila socotayba Sawiro isaga qaadanay.
Gudaha Maqaaxida ayaan kasii gudbay oo waxaan u dhaqaaqay dhanka Xeebta iyo halkii ay yiileen Kuraasta ay dadku ku nasanayeen.
Rag loo diyaariyay adkeynta amniga ayaa baarayay dadka si ay dhaq-dhaqaaqa amni u adkeeyaan. Cidna looma diidayo inay halkaas gasho hadii ay marto tallaabooyinka amni ee goobta loo sameeyay.
Runtii waan rumeysan waayay inay goobtu tahay Liido iyo halkii aan yaraanteydii uso dabaal tagi jiray iyadoo guryo burburay iyo dhagaxaan ay Bahaladu gabaad ka dhigtaan un ay meel kasta oo halkaas ah ka muuqdaan.
Maanta wax kasta waa ay ka duwanyihiin sidii hore! Waxayna dadka Soomaaliyeed ee Qurbaha ka yimid si xuriyad leh ugu dabaalanayaan Xeebta, halka qaarkoodna ay Maqaxida fadhiyaan oo Shaah cabayaan, qaar kalena Mowjadaha Badda oo aad ka dareemeyso sida ay ugu il-doogsanayaan.
Waxaan nafteyda weydiiyay “ Tolow halkani ma Liido baa mise waa meel kale?”
Su’aashaas oo aan wali jawaabteedu kasoo fulin Maskaxdeyda ayaa waxa timid su’ aal kale oo aan nafteyda ku waydiiyay “Ma malaysatay Abid, waxaad maanta arkeyso?”.
Jawaabtuna waxay ii noqotay “ Haa oo halkan waa Liido oo dadkeedii ay go’aansadeen inay ka dhigaan rugtii lagasoo celinayay rajadii luntay ee Umadda Soomaaliyeed!”.
Waa hubaal inay yar tahay cid Soomaali ah oo waqtiyadii burburku jiray malaysan kartay inay Liido noqon doonto Goob ay dadku usoo Dalxiis tagaan lagana heli karo adeegyo la mid ah kuwa laga helo Hodheelada iyo goobaha Dalxiiska ee Caalamka.
Waxaanse ugu niyad qaboojinayaa dadkii sidaas is waydiin jiray amaba iminka la yaabaya aragtida Liido iyo xaaladeeda maanta in wax kasta oo dhacaya uu Ilahay waqti hore qorsheeyay.
Isbedelka maanta ka jira Muqdisho iyo Liido-ne waa mid u Alle ogolaaday, Illahayna isagaa awoodo inuu wax kastaba siduu isaga doonayo ka dhigo.
Mohamed Abdullahi Dhaaley & Saaxiibkiis Lee
Weriyaha Qaranimo Online – Mohamed Abdullahi Dhaaley
Mohamed Abdullahi Dhaaley | Xafiiska Wararka | Qaranimo Online | Muqdisho, Soomaaliya
Other Interesting posts: Shacabka Muqdisho Haka Foojignaado Turkiga oo La...Gudoomiyihii hore ee Sh. Dhexe Cali Jowhar "O...Warsaxaafadeed Shirkii Golaha WasiiraddaNew country, new sport for young Somalis in Minnea...Safaaradda Kenya, Maalinta ciidda iyo carruurta qa...Madaxweynaha oo la kulmay Wasiirka Horumarinta xir...Sow lama dhihi karo warbixinta Jamaal inay ahayd q...Gabayga: MidnimoRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Maanta Kulan La Q...BREAKING NEWS.. Ciidamada dowlada oo galay JowharFadeexad lasoo daristay safiirka Soomaaliya u fadh...Shirweynihii 3aad ee qurba jooga Beesha Karanle ee...Socialize	Posted by QOL Admin on October 27, 2012. Filed under Warka Maanta.
Recent Posts	The New Somali PM – Personal Profile
Madaxweyne Xasan oo ku mashquulsan xulashada RW cusub
Minneapolis resident, born in Somalia, earns nom for SAG Awards
Fiqi oo kawarbixiyay waxqabadkii wasaaradiisa’
President Hassan congratulates Kenya on its 50th Independence Day celebrations
AMISOM congratulates Kenyans on 50 years of Independence